टेबुले र पिर्के सलामीः जनप्रतिनिधिलाई किन यति धेरै भोक? - Everest Dainik - News from Nepal
टेबुले र पिर्के सलामीः जनप्रतिनिधिलाई किन यति धेरै भोक?
काठमाडौं, असार ९ । केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा केही तस्विरहरु भाइरल बनिरहेका छन् । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर परशु नेपालले टेबुलमा चढेर सलामी ग्रहण गरेको फोटोसँगै ओखलढुंगाबाट प्रदेशसभा ‘क’ का लागि निर्वाचित सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले पिर्कामा चढेर सलामी ग्रहण गरेको तस्विर पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मेयरमा विजयी भएका परशु नेपाल हाल एकीकृत पार्टी नेकपाका नेता समेत हुन् । एक कार्यक्रममा उनी टेबुलमाथि चढेर सलामी ग्रहण गरेका थिए । ओखलढुंगाबाट प्रदेशसभा ‘क’ का लागि निर्वाचित सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले पिर्कामा चढेर सलामी लिएका थिए । उनी पनि पूर्व एमाले नेता हुन् ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेल प्रतियोगिताका दौरान उनलाई खेल मैदानमै सिद्धिचरण नगरपालिकाका विद्यार्थीहरुले सलामी दिएका थिए । त्यस्तै प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले पनि पिर्कामा चढेर सलामी लिएका थिए । यी तस्वीरहरलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य र आक्रोश मिश्रित प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भएका छन् । कतिपयले जनप्रतिनिधिलाई सलामीको भोक लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
ट्याग्स: Ambirbabu Singh, Parasu Nepal